IPhones nangalarina tao amin'ny magazay Apple mitentina $ 13.000 | Vaovao momba ny gadget
IPhones nangalarina tao amin'ny magazay Apple mitentina $ 13.000
Andro vitsy lasa izay dia nahita zava-baovao tao amin'ny Internet miresaka momba ny mety hanesoran'i Apple ny tariby fiarovana izay ananan'ny iPhones, iPads, iPods, sns, ao amin'ny magazay fivarotana. Izany dia tokony hatao mba hananan'ny mpampiasa fahalalahana bebe kokoa rehefa mampiasa ny finday avo lenta ary indraindray, mba hamongorana izay tena kely tian'ny Apple amin'ny fitaovana, ny tariby. Ity, na dia marina aza, dia efa hita ao amin'ireo magazay vaovao misy ny orinasa miaraka amin'ny paoma manaikitra, dia mety ho olana fanampiny fanampiny hisorohana ny halatra toa ilay efa natao tao amin'ny magazay Apple Natick Fanangonana an'i Massachusetts, izay mahatratra $ 13.000 ho an'ny iPhones.
Ny marina dia ny fepetra tadiavin'izy ireo amin'ny tariby fiarovana dia misy safidy mialoha azy ireo Rehefa mijanona amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny iPhone, iPad na ny fitaovana dia mijanona tsy miasa ary toa milanja taratasy mahafinaritra. Ity dia zavatra iray izay tsy maintsy hazava tsara amin'ny naman'ny olon-kafa, saingy mazava ho azy fa manamora ny zavatra ho azy ireo izany raha ny amin'ny faran'ny terminal ...
Na ahoana na ahoana, ny vaovao dia tsy misy ifandraisany amin'ny safidy hanafoanana ny tariby amin'ireo fitaovana ananany any am-pivarotana, fa kosa amin'ny halatra ataon'ny andiana mpangalatra amin'ity fivarotana amerikanina ity. Olona marobe no niditra tao amin'ilay magazay niaraka tamin'ny hood ary naka ny terminal fa tsy nahazo fanoherana firy momba ny fiarovana ny fivarotana ary koa ny toeram-pivarotana. Iray amin'ireo horonan-tsary izay ahitanao ny fomba fiasan'ity vondrona mpangalatra ity.
Ny marina dia toa tsy manana an'io mekanika io ireo fitaovana ireo ankehitriny izay mamela azy ireo tsy hihetsika ary entin'ireto mpangalatra ireto hamidy indray. Raha ny marina dia mipetraka ny fanontaniana momba ny filaminan'ny trano sy ny ivontoerana miantsena, saingy efa eo am-pelatanan'ny polisy manadihady ny raharaha izy io. Raha manao fanesorana tariby fiarovana amin'ny fitaovanao i Apple tsara raha nampitandrina ianao fa hijanona ireo raha vantany vao mivoaka ny varavarana ianao, na dia izany aza dia ho olana ny fisorohana ny halatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » IPhones nangalarina tao amin'ny magazay Apple mitentina $ 13.000
$ 13.000 na iPhone 14 dia tsy misy dikany izany
Ny Xiaomi Mi Note 2 dia hanana ny fiolahana avo roa heny izay nananan'ny Samsung Galaxy Note 7